Ukuya phi ngoMeyi: Iindawo ezi-10 ezilungileyo kwihlabathi liphela | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 18/05/2021 10:25 | Iindawo zokutyelela, Izikhokelo
Sifuna ukukuxelela kweli nqaku malunga nokuba ungahamba phi ngoMeyi: iindawo ezilishumi eziphezulu. Isizathu silula: intwasahlobo izisa imozulu elungileyo, iintsuku zinde kwaye amaqondo obushushu aqala ukunyuka. Njengokuba konke oku akwanelanga, ixesha leemvula alikakahlali e-Asiya kwaye ubusika abukabonakali eMzantsi Melika.
Konke oku kwenza Ukuhamba ngoMeyi ngumbono omkhulu. Ukongeza, iihotele zihlala zitshiphu kunehlobo kwaye iindawo ezininzi zibhiyozela maqela inika umdla kakhulu. Ukuba kuyo yonke le nto uyongeza ukuba indawo zabakhenkethi zixinene kunangoJulayi okanye uAgasti, unezizathu ezininzi zokucinga ukuba ungahamba phi ngoMeyi. Siza kukubonisa iindawo ezilishumi ezifanelekileyo zokuzenza.
1 Ukuya phi ngoMeyi: iindawo ezi-10 ezilungileyo, ukusuka emazantsi eSpain ukuya kumanxweme ePhilippines
1.1 Prague, indawo yomculo onokuya kuyo ngoMeyi
1.2 IPorto: ungahamba phi ngoMeyi ukuba ufuna into eyahlukileyo
1.3 ENormandy, umhlaba wamawa amangalisayo
1.4 ISeville, ubunewunewu obusondeleyo
1.5 INew York ihlala ilungile ukubheja
1.6 ISipro, igugu kwiMeditera
1.7 La Palma, uhambo olwahlukileyo kwiiCanary Islands
1.8 IBantayan, uxolo lwesiqithi esikwiiPhilippines
1.9 ICórdoba, umtsalane weSixeko sikaCaliphal
1.10 ICosta Rica, umhlaba weepaki zendalo
Ukuya phi ngoMeyi: iindawo ezi-10 ezilungileyo, ukusuka emazantsi eSpain ukuya kumanxweme ePhilippines
Iindawo esiza kuphakamisa zona zibandakanya imihlaba efana nephupha, iilwandle ezingenakuthelekiswa nanto, izikhumbuzo ezininzi kunye neminyhadala yesiko eyaziwa kwilizwe liphela. Siza kuqala ukhenketho lwethu lokuya kwiindawo ngoMeyi.
Prague, indawo yomculo onokuya kuyo ngoMeyi
Inqaba yasePrague kunye neCathhedral
Ikomkhulu lommandla wase Czech Bohemia Yindawo yokuqala esikucebisa yona. Njengokuba ubukhulu bayo belifa lemveli bebungesosizathu, ukusukela phakathi ku-Meyi ukuya ekuqaleni kukaJuni kuyibhiyozela Umnyhadala woMculo weNtwasahlobo weHlabathi. Iiokhestra ezinkulu kunye nabaqhubi badibana edolophini ukuze benze iikonsathi ezingalibalekiyo.
Ke ngoko, ukuba ungumthandi womculo, sicebisa uhambo oluya ePrague ukonwabela lo msitho. Kwaye, ngasendleleni, musa ukuyeka ukutyelela izithili zeNqaba neMala Strana, apho uza kubona izikhumbuzo ezinomtsalane njengePrague castle uqobo Vitus Cathedral yaseSt okanye ezixabisekileyo Charles ibhulorho. Kwakhona, ungalibali ukuhamba Inkwenkwezi yeMesto, isixeko samaxesha aphakathi apho uza kufumana i IHolo yaseKapa Ngewotshi yayo edumileyo yeenkwenkwezi.
IPorto: ungahamba phi ngoMeyi ukuba ufuna into eyahlukileyo
I-Porto, indawo efanelekileyo yokuya kuyo ngoMeyi
Ngokuqinisekileyo esona sixeko sihle ePortugal Lisboa kwaye iilwandle ezintle kwilizwe zikhona Ialgarve. Nangona kunjalo, iPorto ikwanokuninzi ekunokukunika. Ukuqala, idolophu yakudala ibhengeziwe Ilifa lehlabathi yolwakhiwo olunjengecawa yayo enkulu, ibhotwe layo leStock Exchange, icawa kunye nenqaba yeClérigos okanye iibhlorho zayo ezininzi ngaphezulu komlambo iDuero.
Kodwa, ukongeza, ungonwabela imihlaba edlamkileyo ye IRibeza, apho baya kukunika iikeyiki ezithandwayo zekrimu kunye newayini yePort engaziwayo. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukwazi inkqubo yokwenza le yokugqibela, uneevenkile ezininzi kwelinye icala leDuero.
Okokugqibela, sukuyeka ukundwendwela iimyuziyam zedolophu yasePortugal. Sikucebisa i I-medieval, ekule Casa del Infante, yomhla wenkulungwane yeshumi elinesithathu; enye ye Imoto yombane, kunye nezithuthi zayo ezindala, kunye I-Soares yenza iReis kaZwelonke, ebonisa indawo elungileyo yomsebenzi womkroli onika igama layo, enye yezona zidumileyo kwimbali yasePortugal.
ENormandy, umhlaba wamawa amangalisayo
Ime kumantla e- EFransi, I-Normandy intle ngeli xesha. Ukuba uyindwendwela, uya kufumana amawa amangalisayo anjengezo ÉUkukhawuleza, kodwa kunye neelwandle zasendle ezingayijonganga IsiNgesi Channel kunye neminye imihlaba emangalisayo.
Unokubona kwakhona izixeko zembali ezinje URuan, apho yatshiswa khona UJoan waseArc kwaye inezikhumbuzo ezinjengeCathhedral of Our Lady, isacholo sendlela yamaGoth; i-Abbey ebabazekayo yase-Saint-Ouen kunye neCawa yase-Saint-Maclou, imizekelo emibini ye-Gothic evuthayo, kunye nesakhiwo esihle se-Hotel de Bourgtheroulde, sitshintshela kwisitayela se-Renaissance.
Olunye utyelelo ongenakukuphosa eNormandy le Havre, Iziko lakhe eliyimbali Ilifa lehlabathi ngenxa yecawa yeRenaissance ekhethekileyo, inqaba yesibane secawa yaseSaint-Joseph kunye nezinye izikhumbuzo.
Kodwa ngaphezu kwako konke, awunakushiya iNormandy ngaphandle kokundwendwela Isiqithi saseMont Saint-Michel, eshiya imeko yesiqithi sayo xa kuphuma umjelo kwaye apho kukho i-Benedictine abbey enomtsalane enegama elifanayo, edibanisa isitayile seCarolingian, Romanesque kunye neGothic.
ISeville, ubunewunewu obusondeleyo
Akunyanzelekanga ukuba ushiye iSpain ukuze ukhethe apho uza kuhamba khona ngoMeyi. Ikomkhulu laseAndalusi yindawo entle ukonwabela intwasahlobo. ESeville unezikhumbuzo ezintle ezinje ngokumangalisa Icawa enkulu ngokunganyanzeliswa kancinci Giralda; i inqaba yeGolide okanye Alcazar yokwenyani, I-jewel edibanisa izitayela zeGothic kunye neMudejar.
Ngala maxesha, kodwa akukho nto intle kangaka ISpain Square, Yakhelwe i-Ibero-American Exposition yowe-1929 kwaye iyachukumisa ubungakanani bayo kunye nokuma kwayo. Kwakhona, ungalibali ukuhamba ngeendawo zayo ezintle ezinje Triana okanye ye Santa Cruz kunye nezinto ezixabisekileyo Ipaki kaMaria Luisa.
Kodwa, ukongeza, iSeville inomnye umtsalane ngeli xesha. Ekuqaleni kuka-Meyi wakhe odumileyo efanelekileyo, kunye nokukhanya kwendabuko kunye nalapho ungonwabela iwayini kunye nomculo womhlaba.
INew York ihlala ilungile ukubheja
Umfanekiso oqingqiweyo wenkululeko
Sitshintsha amazwe kunye namazwekazi ukumema ukuba utyelele iNew York, ukubheja kohambo okungaze kusilele. Naliphi na ixesha lixesha elifanelekileyo lokuya "kwisixeko sabakhi bezakhiwo." Kuyo, ungaqala ukhenketho lwakho Times Square, isikwere esidumileyo sezikrini ezinkulu. Emva koko ungandwendwela iindawo abahlala kuzo, ikakhulu IBrooklin o Harlem, kwaye uhambe Central Park okanye ubone umboniso kwi Broadway.
Kodwa into ongenakuyeka ukuyenza kukubona Umzekelo wenkululeko, la Isiqithi seellis, apho abemi abavela kwihlabathi liphela beze kukhangela iphupha laseMelika kwaye sisikhumbuzo sokufuduka, kunye neemyuziyam ezinje IMetropolitan yoBugcisa, yenye yezona zinkulu kwaye zibaluleke kakhulu kuhlobo lwazo emhlabeni.
ISipro, igugu kwiMeditera
Umntu ohluke kakhulu kunalowo ungaphambili unendawo ekuyiwa kuyo ngoku. ISipro yindibaniselwano egqibeleleyo yamabhishi anomtsalane kunye neendawo ezinelifa elinembali. Malunga neyokuqala, sicebisa Nissi y Makronissos, apho unokuziqhelanisa nokuntywila.
Ngokubhekisele kwilifa lemveli, eSipro uya kufumana indawo entle yeemonki ezinjengezo I-Irakleidios eNgcwele kunye neenqaba zamaxesha aphakathi anje ngala Kolossi, zakhiwe ziinqwelomoya zoMyalelo weSan Juan, ecaleni kwa icawa njengaleyo ITroodos massif, yamkelwe njenge Ilifa lehlabathi.
Kwelinye icala, kwikomkhulu lelizwe, NicosiaUnemyuziyam enomtsalane apho unokujonga khona yonke imbali yesiqithi ukusuka kwiNeolithic ukuya kumaxesha e-Ottoman. Kodwa ngaphambi kokuba ubone ifayile ye udonga lwamaxesha aphakathi eyakhiwe yiVenetians, ejikeleze idolophu yakudala efikeleleka kwiminyango enje nge Famagusta.
La Palma, uhambo olwahlukileyo kwiiCanary Islands
Roque de los Muchachos, eLa Palma
Ukuphendula umbuzo wokuba ungaya phi ngoMeyi, sicebisa esinye isiqithi esingezantsi. Siza kukuxelela malunga neLa Palma, enye yezona zincinci zaziwayo kwiiCanary Islands, kodwa zigcwele ukubukeka okumangalisayo, iilwandle zamaphupha kunye needolophu eziqhelekileyo.
Yaziwa njenge "isiqithi esihle", ukuba uyindwendwela, ungonwabela indawo ezinesanti ezifana nezo Izibuko laseNaos, Idama eliluhlaza o ILos Cancajos. Kodwa kunye namahlathi aluhlaza kunye neentaba-mlilo ezinqabileyo ezinjengezo Ndinesikhokelo okanye ICaldera de Taburiente, ekujikelezwe kuyo ipaki yelizwe.
Ekugqibeleni ungene ISanta Cruz de la Palma, ikomkhulu lesiqithi, unezikhumbuzo ezifana Iicawa zaseSan Francisco naseSanto Domingo, amandla anjenge Inqaba yaseSanta Catalina kunye neendawo zokuhlala ezintle njengaye Ibhotwe laseSotomayor okanye Indlu ephambili yeSalazar.
IBantayan, uxolo lwesiqithi esikwiiPhilippines
I-Asia ihlala inomdla ukukhetha ukuhlala iholide elungileyo, awona mazwe atyelelweyo kweli lizwekazi Bahlala ekhaya kwiindawo ezintle, kodwa ukuba uqinisekile ukuba indawo yakho yokuhamba ngoMeyi kufuneka ube nolwandle, cinga ukubalekela kwisiqithi sasePhilippines saseBantayan. Phakathi kweelwandle zayo zamaphupha, sicebisa ukuba Kota, ngolwimi lwayo lentlabathi; Iswekile; leyo ye IParadesi okanye eyona irhabaxa onokuyifumana kwifayile ye- Isiqithi sentombi, onokufikelela kuyo ngokurenta esinye sezikhephe zalapha ekhaya, esibizwa Bangka.
Awunanto ininzi onokuyenza eBantayan. Ngaphandle kwezi ndawo zichazwe ngentla ngentlabathi, ungahamba I-Omagieca Obo-Ob Mangrove Ecopark, indawo yendalo yemangrove enomtsalane. Ngayiphi na imeko, ngaphakathi kweendawo zokuya ku-Meyi, le yenye yezo zinayo iilwandle ezingcono kunye noxolo ngakumbi.
ICórdoba, umtsalane weSixeko sikaCaliphal
Kusoloko kulixesha elifanelekileyo ukutyelela isixeko saseAndorus eCórdoba. Ayilolize, yenye yeendawo ezinamatye ezikhumbuzo Ilifa leMveli kumhlaba jikelele. Phantse ngokungeyomfuneko kukuba sikuxelele malunga nomtsalane wayo Mencinci, okwangoku yiCathhedral yoNyuko lweNenekazi lethu; kwilifa layo laseRoma; Kwikota yayo yamaJuda yakudala apho ungasandwendwela khona Indlu yaseSepharad kunye kwindlu yesikhungu; ye iibhafu zecaliphal okanye ukunyanzeliswa UAlcazar wooKumkani bamaKrestu.
Kwangokunjalo, ngaphandle kwesixeko unento entsonkothileyo IMedina Azahara, enye yeencopho, ecaleni kweAlhambra eseGranada, yoyilo lwamaSilamsi eSpain. Kodwa kukuba, ukongeza, ngenyanga kaMeyi uCórdoba uyayibhiyozela Iqela lamaPatios, ibhengeziwe Ilifa leMveli loLuntu elingabonakaliyo, kunye ne Ngomhla weCross Crosses.
ICosta Rica, umhlaba weepaki zendalo
Silutshintshe ngokupheleleyo uhlobo lwendawo ekuyiwa kuyo ukugqiba uluhlu lwethu lokuba ungahamba ngo-Meyi. ICosta Rica imele ubume bayo obonwabisayo. Unobungqina obufanelekileyo boku kwi uthungelwano lwepaki yesizwe, ezinye zineentaba ezinye zisembindini wethafa eliselunxwemeni.
Ngokumalunga neyokuqala, sikucebisa ukuba ubone enye ivela e-Arenal volcano o lo uvela eIrazú, ngelixa, njengemizuzwana, kunjalo iCahuita, kunye neengqaqa zekorale namahlathi ashinyeneyo akweleenjiko; le ivela kwiBarra Honda, nemiqolomba yayo, okanye EzikaCarara, kunye nemithi yemveli.
Le yokugqibela imalunga neekhilomitha ezilikhulu ukusuka San José, ikomkhulu lelizwe. Kuyo, unokubona izakhiwo ze-neoclassical ezintle ezinje nge Inqaba yaseMoror, Iposi kunye neTelegraph okanye leyo Iqonga lesizwe, Kunye ne- KwiCawa yeDolophu kunye neecawe ze inceba, de ubulolo kunye Carmen. Ukuba ufuna ukwazi ezinye iindawo eCosta Rica, siyakukhuthaza ukuba ufunde eli nqaku.
Ukuqukumbela, ukuba ubuzibuza apho unokuhamba khona ngoMeyi, Sibonise iindawo ezilishumi zokufikel ezikukuqaqamba kwabo okuphezulu ngelo xesha. Ngoku ukhetho luxhomekeke kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo zokutyelela » Ukuya phi ngoMeyi: Iindawo ezi-10 ezilungileyo